site ကိုအုပ်ချုပ်ရေး mamaclub.info (အဆိုပါဆိုက်) ၏ website ဧည့်သည်များ၏အခွင့်အရေးကိုလေးစားပါသည်။ ကျနော်တို့အပြည့်အဝကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ကိုမှဧည့်သည်များ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏လျှို့ဝှက်ချက်များ၏အရေးပါမှုကိုအသိအမှတ်ပြုသည်။ ဤစာမျက်နှာကိုကျနော်တို့ခံယူခြင်းနှင့်သင်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါစုဆောင်းအချက်အလက်များ၏အဘယ်အရာကိုမျိုးကိုအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ပါရှိသည်။ ငါတို့သည်ဤအချက်အလက်သည်သင်ကျွန်တော်တို့ကိုထောက်ပံ့ပေးကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်. အသိပေးဆုံးဖြတ်ချက်များအောင်ကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
သင်ဆိုက်ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာကျနော်တို့ ( "အကူးအပြောင်းစီးဆင်းမှုလှုပ်ရှားမှု" ဒါခေါ်) အခြားရန်သင့်ပံ့ပိုးပေးခြင်းနှင့်တိုင်းပြည်၏ဒိုမိန်းနာမည်အဖြစ်တဦးတည်းစာမျက်နှာကနေရှေးခယျြထားတဲ့အသွင်ကူးပြောင်းမှုသတ်မှတ်။
အဆိုပါ site ကိုလာရောက်လည်ပတ်သို့မဟုတ်ထို site ပေါ်တွင်မှတ်ပုံတင်တဲ့အခါသင်ဆန္ဒအလျောက်ပေးသာပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသတ်မှတ်သတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်း။ "ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို" ၏အယူအဆထိုကဲ့သို့သောသင့်ရဲ့အမည်သို့မဟုတ်အီးမေးလ်လိပ်စာအဖြစ်သတ်သတ်မှတ်မှတ်တစ်ဦးချင်း, အဖြစ်သငျသညျဖျောသတင်းအချက်အလက်ပါဝင်သည်။ သင်မှတ်ပုံတင်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်မှတဆင့်သွားစရာမလိုဘဲထို site ရဲ့ contents ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်နေစဉ်, သငျသညျအခြို့သော features တွေရယူနိုင်ရန်အတွက်မှတ်ပုံတင်ရန်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ဥပမာ, ဆောင်းပါးပေါ်တွင်သင်၏မှတ်ချက်ထားခဲ့ပါ။
အဆိုပါ site ကိုစာရင်းအင်းအစီရင်ခံစာများကိုဖန်တီးရန်« cookies များကို»နည်းပညာ ( "cookies များကို") ကိုအသုံးပြုပါတယ်။ "Cookies" ကိုအချက်အလက်များ၏သေးငယ်တဲ့ပမာဏဖြစ်ပါတယ်, သင့်ကွန်ပျူတာ၏ hard disk ကိုရန်သင့်ကွန်ပျူတာ၏ browser ကိုသော web site ကိုပေးပို့သည်။ အဆိုပါ« cookies များကို»ဆိုက်များအတွက်လိုအပ်သောဖြစ်မည်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်များပါဝင်သည် - ဆိုက်ပေါ်တွင်စာရင်းအင်းအချက်အလက်များ၏စုဆောင်းခြင်းကြည့်ရှုဘို့သင့် settings ကိုနဲ့ options ကယ်ဖို့, ဆိုလိုသည်မှာ, အရာ, သင်သည် loaded ခဲ့ရာ, အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုပေးဒါပေါ်တွင် site ကိုမှအကူးအပြောင်းစေရာကနေအဆိုပါဧည့်သည်များ၏တိုင်းပြည်အဖြစ် Third-party ကို web ဆိုဒ်များလိပ်စာများ၏ domain name ကိုသွားရောက်ခဲ့ပြီးစာမျက်နှာများ။ သို့သော်ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုသတင်းအချက်အလက်တစ်ဦးချင်းသကဲ့သို့သင်တို့နှင့်အတူလုပ်ဖို့ဘယ်အရာမျှရှိပါတယ်။ «ကွတ်ကီး»သင့်အီးမေးလ်လိပ်စာနှင့်သင့်အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုရေးပါဘူး။ ဒါ့အပြင်အဆိုပါနည်းပညာကိုအခြားကုမ္ပဏီများ (စသည်တို့ကို Google က, Yandex, Facebook,) ၏ကောင်တာကတည်ထောင်သည့် Website တွင်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
ထို့အပြင်ကျနော်တို့ဧည့်သည်များ၏အရေအတွက်ကိုရေတွက်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ site ၏နည်းပညာဆိုင်ရာစွမ်းရည်ကိုအကဲဖြတ်ဖို့ web server ကိုစံမှတ်ပုံတင်ကိုအသုံးပြုပါ။ ကျနော်တို့ site ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်သုံးစွဲသူများသည် browser ၏ဆိုက်ကိုအသုံးပြုခဲ့တဲ့သေချာ, ငါတို့ဧည့်သည်များအတွက်တတ်နိုင်သမျှကျွန်မတို့ရဲ့စာမျက်နှာများများ၏ content အဖြစ်အသုံးဝင်သောစေရန်များအတွက်အများဆုံးအဆင်ပြေလမ်းအတွက်စာမကျြနှာကိုစုစည်းပြီးလူမည်မျှဆုံးဖြတ်ရန်ဤသတင်းအချက်အလက်ကိုသုံးပါ။ ကျနော်တို့ဆိုက်ကိုအပေါ်လှုပ်ရှားမှုများကိုပတ်သတ်သောအချက်အလက်များကိုမှတ်တမ်းတင်, ဒါပေမယ့်မဆိုက်ဖို့တစ်ဦးချင်းစီဧည့်သည်များနှင့်ပတ်သက်ပြီး, သငျသညျကိုယျတိုငျကိုသင့်ရဲ့သဘောတူညီချက်မပါဘဲဆိုက်၏အုပ်ချုပ်ရေးအားဖြင့်သိုလှောင်ထားသောသို့မဟုတ်အသုံးပြုမည်မဟုတ်ပါရည်မှတ်သောကြောင့်အဘယ်သူမျှမကွန်ကရစ်သတင်းအချက်အလက်။
ဒါဟာ« cookies များကို»ဒါမှမဟုတ်သင်ကသူတို့ရဝုဏ်နှင့် ပတ်သက်. အသိပေးလက်မခံခဲ့ပါဘူးဒါကြောင့်« cookies များကို»မရှိဘဲပစ္စည်းကြည့်ရှုရန်, သင်သည်သင်၏ browser ကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ကျနော်တို့က "အကူအညီ" အပိုင်းအတွက်ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းနှင့်« cookies များကို»များ၏ browser setting ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်မည်သို့မည်ပုံထွက်ရှာရန်သင့်အားအကြံပြုသည်။
အဘယ်သူမျှမအခြေအနေများအောက်တွင်ဆိုက်ကိုစီမံခန့်ခွဲနေပါစေဘယ်လိုမဆိုတတိယပါတီများ, ရောင်းချမသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏အသုံးပြုမှုကိုမှမပေးပါဘူး။ ငါတို့သည်လည်းပညတ်တရားအားဖြင့်လိုအပ်သောအဖြစ် မှလွဲ. သင်ပေးပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုထုတ်ဖော်မရကြဘူး။
ဆိုက်ကိုစီမံခန့်ခွဲနေတဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်၏စာမကျြနှာမှာရှိတဲ့ငွေကြေးပြန်လည်အခြေခံပေါ်မှာကြော်ငြာတွေနဲ့မြှင့်တင်ရေးပစ္စည်းများကိုနေရာဖြစ်သော Google နှင့်ပူးပေါင်း, (အပါအဝင်, ဒါပေမယ့်ကန့်သတ်ဘဲ, စာသား, hyperlinks) ရှိပါတယ်။ ဒီပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု site ကိုအုပ်ချုပ်ရေး၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်အားလုံးစိတ်ဝင်စားပါတီများအောက်ပါအချက်အလက်များကိုအသိပေး:
1 ။ တတိယပါတီရောင်းချသူအဖြစ် Google ကဆိုက်ပေါ်တွင်ပြသကြော်ငြာများအဘို့အ« cookie ကို»ဖိုင်တွေကိုအသုံးပြု;
2 ။ ဖိုင်တွေ« cookie ကို»မြှင့်တင်ရေးထုတ်ကုန်ကြော်ငြာအတွက် Google ကအသုံးပြုခဲ့သော« DoubleClick DART »အကြောင်းအရာအစီအစဉ်ကိုပါဝင်သူအတွက် AdSense တူသောက်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင်ပြသ။
3 ။ Google ကဖိုင်တွေ« cookie ကို DART »အားဖြင့်အသုံးပြုခြင်းကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ပတ်သက်. ကြော်ငြာများကိုပေးနိုင်ရန်အတွက်ဆိုက်ကိုနှင့်အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များရန်သင့်လည်ပတ်မှုနှင့် ပတ်သက်. (ထိုအမည်, လိပ်စာ, အီးမေးလိပ်စာသို့မဟုတ်တယ်လီဖုန်းနံပါတ် မှလွဲ. ) ကိုဆိုက်ကိုမှဧည့်သည်များနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်းသုံးစွဲဖို့ခွင့်ပြုခြင်းနှင့် န်ဆောင်မှု။
4 ။ Google ကဤအချက်အလက်သည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်လျှို့ဝှက်မူဝါဒလမျးညှနျစုဆောင်း၏လုပ်ငန်းစဉ်၌ရှိ၏
5 ။ ဆိုက်ကိုအသုံးပြုသူများကိုလာရောက်လည်ပတ်နေဖြင့်« cookie ကို DART »ဖိုင်တွေများအသုံးပြုခြင်းမှရှောင်ဖယ်နိုင်ပါတယ် ကြော်ငြာတွေကိုများအတွက်သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒနှင့်ဂူဂဲလ်အကြောင်းအရာကွန်ယက်ကို.
သငျသညျမိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ဆိုဒ်များအပါအဝင် Third-party က်ဘ်ဆိုက်များ, သွားရောက်လည်ပတ်သောအခါပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏လွှဲပြောင်းသတိရပါဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ်ဆိုက်ဖို့ link တစ်ခုပါရှိသည်ဒါမှမဟုတ်ဆိုက်ကိုဤဝက်ဘ်ဆိုက်များမှ link တစ်ခုပါရှိသည်လျှင်ပင်, ဤစာရွက်စာတမ်းများ၏နယ်ပယ်အတွင်းမကျကြဘူး။ ဝက်ဘ်ဆိုက်အုပ်ချုပ်ရေးအခြားသော website များ၏လုပ်ရပ်များအတွက်တာဝန်ရှိမဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီကုမ္ပဏီတွေကများ၏က်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင်တည်ရှိပြီးစုဆောင်းခြင်းနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏ဂီယာ၏ဖြစ်စဉ်ကိုသငျသညျမှာ "ပုဂ္ဂိုလ်ရေး data တွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး" ကစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ဤဆိုဒ်များသို့သွားရောက်သည့်အခါဖြစ်စေ, အလားတူ။
သို့သျောလညျး, သငျ cookies တွေကို files တွေကို disable လုပ်ဖို့သုံးတဲ့ဘရောက်ဇာပေါ်တွင် မူတည်. အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများများတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကအောက်ပါလင့်ခ်ကိုတွေ့မြင် .:
သင့် browser setting များကိုပြောင်းလဲနေ, သင်၏စက်ပစ္စည်းတွင် cookies နဲ့စတိုးဆိုင်၏အသုံးပြုမှုကိုငြင်းပယ်, သင်ဆိုက်ကို browse နိုင်ပေမယ့်တချို့ options များသို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုအလုပ်လုပ်မပြုစေခြင်းငှါသတိပြုပါ။
မူပိုင်ခွင့်© 2020 MamaClub | တို့က Powered Astra WordPress အခင်းအကျင်း